Edson - Tsy misy pretra - Countdown ho an'ny fanjakana
Ny hafatra rehetra
Makà fisintonana Virtual miaraka amin'i Fr. Michel Rodrigue
Mpanome vola anay
Edson - Tsy misy Pretra
Mpanjakavavin'ny rosary sy fiadanan'i	Edson Glauber	on 18 Oktobra, 2020:
Fiadanana, anaka malalako, fiadanana! Anaka, izaho ny Reninao dia avy any an-danitra hangataka am-bavaka anao ho an'ireo zanako lahy izay pretra sy ho an'ny Fiangonana Masina iray manontolo. Raha tsy misy pretra dia tsy azonao ny fitahiana sy fahasoavana ary hazavana tian'i Jesosy Zanako homena anao ao amin'ny Sakramenta Masina. Raha tsy misy pretra dia tsy azonao atao ny miady amin'ny fanafihana sy ny fandriky ny fanahy ratsy izay mitady isan'andro hitandrina anao amin'ny lalan'ny Tompo. Mivavaha ho an'ireo zanako lahy izay pretra ary tafaray amin'izy ireo amin'ny fivavahanao, sorona sy fivalozanao, ary ny herin'ny tsara dia handresy ny ratsy rehetra izay misy eto ambonin'ny tany ankehitriny. Miaraka aminao ny zanako lahy ary miaraka aminao miaraka amin'ny vadiko Josefa vadiko aho, ary izahay, ny Masina Masina, tsy mandao anao velively, ary tsy mamela anao irery izahay na dia vetivety fotsiny aza. Raiso ny fiadanako sy ny tso-dranoko: amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen!
Posted in Edson sy Maria, Messages.
← Alicja - Amin'ny fampitandremana
Pedro - Sambo lehibe, lehibe… →
Fanahy any Kalifornia
Fanahy tsy azo inoana
Makà fisintonana virtoaly miaraka amin'i Fr. Michel Rodrigue
Mpanompon’Andriamatoa Luisa Piccarreta
Simona sy Angela
Avy amin'ny mpamatsy vola anay
Ny vanim-potoana amin'ny Anti-Kristy
Ny fiverenan'ny fitaoman'i satana
Ny Fiaviana Fanindroany
Ny Andro telo maizina
Ny fotoan'ny fahoriana
Fampitandremana, fanavaozana, fahagagana
Fa inona no mpahita?
Demonia sy ny devoly
Luz de Maria - Fikororohana lehibe
Gisella - Ny fitarainan'ny fahaterahana
Pedro - Tandremo
Edson - Tsy ho ela, fitsapana lehibe
Angela - Raha tsy vonona ianao
antikristy Fivadiham-pinoana Malagasy fiangonana katolika famaizana Chastisements fiangonana kominisma fifanjevoana fiovam-po Coronavirus Covidien-19 division Ny fandriam-pahalemana Eokaristia finoana tahotra Fr. Michel Fahazavana momba ny feon'ny fieritreretana Mametaveta ny fo Jesosy fanaintainan'ny mpiasa Mary New World Order Ilay Reninay fanenjehana Papa vavaka faminaniana fanadiovana fialofana fialofana fibebahana revolisiona sapile fisarahana Soratra Masina Fiarovana ara-panahy fitsapana fahoriana Triumph fahatokiana fahamarinana ady fampitandremana
Fepetra sy fepetra ary politika momba ny fiainana manokana
Ny famolavolana tranonkala nataon'i tiDesign © 2020
Fa maninona no Edson Glauber?
Tamin'ny 1994, ny fisehon'i Jesosy, ny Tompontsika ary ny St. Joseph ka hatrany Edson Glauber, roa amby roapolo taona, ary ny reniny, Maria do Carmo. Nanjary nantsoina ho fisehoana Itapiranga, nomena anarana taorian'ny tanàna niaviany tany anaty alan'i Amazon breziliana. Ilay Maria Virjiny dia nanondro ny tenany ho "Mpanjakavavin'ny Rosary sy ny fandriam-pahalemana" ary ireo hafatra matetika dia nanantitrantitra ny hivavaka isan'andro amin'ny Rosary — indrindra indrindra ny rosary fianakaviana, mamily ny fahitalavitra, handeha amin'ny fiaiken-keloka, Eokaristia Fiainana, ny fanamafisana fa Ny tena Fiangonana dia ny fiangonana Apostolika romana romana, ary efa akaiky ny "renirano famaizana". Ny Tompontsika dia naneho ny lanitra, ny helo ary ny fanadiovana an'i Edson, ary niaraka tamin'ny Zanany, dia nanome fampianarana isan-karazany ho an'ny fianakaviana ho an'i Maria do Carmo.
Ankoatra izany, ny Our Lady dia mangataka ny fitoriana ny filazantsara kristiana nitodika tamin'ny fomba miavaka ho an'ny tanora sy ny fananganana trano fiangonana tsotra ho an'ny mpivahiny, ary koa ny andrim-pananganana lasopy lasopy ao Itapiranga ho an'ny ankizy sahirana.
Ny rain'i Edson, izay nivadika alikaola dia niova fo noho ny fitarihan'ireo fisehoana, tsy ho ela dia hita teo an-dohalika nivavahany ny Rosary tamin'ny ora maraina, ary ny Our Lady dia nilaza momba ny tany iray izay fananany. izy sy amin'Andriamanitra. Nikasika ny tanany ny mpanjakavavin'ny Rosary izay nidina avy amin'ny toerana niseho teny Itapiranga ary nangataka ny hitondrana azy any amin'ny marary izany. Betsaka ny fanasitranana mahagaga notaterina, nohadinin'ny dokotera tsara ary naroso ho any amin'ny Prefektora Apostolikan'ny Italianaatiara. Nangataka ihany koa izy ny hanorina trano fiangonana iray izay mbola mijoro.
Tamin'ny 1997, ny hafatr'i Itapiranga indraindray dia nanasongadina ny fahafoizan-tena ho an'i St. Joseph's Chaste Heart, ary nangataka i Jesosy mba hampidirina ao am-piangonana ny andro firavoravoana:
Iriko ny alarobia voalohany, aorian'ny Fety ao amin'ny foko masina sy ny fon'i Maria tsy manam-paharoa, dia natokana ho amin'ny fetin'ny fon'ny madio indrindra ao Masin'i Joseph.
Ny alarobia 11 jona 1997, ny andro tamin'io taona fangatahana io, dia nilaza ny manaraka ity Reny Misaotra, izay nanondro ireo fitohitohizan'ny fianakavian'i Holy izay nitranga tany Ghiaie de Bonate tao avaratr'i Italia, nandritra ny taona 1940— ny fisehoana izay nanaovana an'i St Joseph Joseph dia namboarina ihany koa:
Ry zanaka malala, fony aho niseho tao Ghiaie di Bonate niaraka tamin'i Jesosy sy i St. Joseph, te hasehoko aminareo fa any am-piangonana manontolo dia tokony hanana fitiavana lehibe ny Fo Madio Masidin'i Joseph Joseph sy amin'ny Fianakaviana Masina, satria Satana dia hamely ny fianakaviana fatratra tokoa amin'izao fotoan-taona izao, ka handringana azy ireo. Saingy tonga indray aho, mitondra ny fahasoavan'Andriamanitra, Tompontsika, hanome izany ho an'ny fianakaviana rehetra tena mila ny fiarovana avy amin'Andriamanitra.
Tahaka ny nitranga tamin'ny fisehon-dahatsoratra Marian hafa, toa an'i Fatima sy Medjugorje, dia nanambara tamin'ny tsiambaratelo Edson izay mifandraika amin'ny hoavin'ny Fiangonana sy izao tontolo izao ny Our Lady, ary koa ny zava-mitranga lehibe tokoa amin'ny ho avy raha tsy miova ny olombelona. Amin'izao fotoana izao, misy tsiambaratelo sivy: efatra mifandraika amin'i Brezila, roa ho an'izao tontolo izao, roa ho an'ny Fiangonana, ary iray ho an'ireo izay manohy miaina fiainana ota. Nilaza tamin'i Edson ny Our Lady fa hamela masony hita eo amin'ny Tendrombohitra Lakroa izy akaikin'ny trano fiangonana ao Itapiranga.
Tamin'ny 4 Oktobra 1996, niseho teo anoloan'ny hazo fijaliana teo an-tendrombohitra teo akaikin'ny trano fiangonana, dia nilaza i Virjiny:
«Ry malalako, tiako ny milaza aminao izao tolakandro izao ary holazaiko amin'ny zanako rehetra ny maha zava-dehibe ny fiainana ny hafatra. Ho an'ireo tsy mino, tiako ny milaza azy ireo fa indray andro any, izay misy an'io Lakroa io dia hanome famantarana hita maso aho ary hino ny fahatongavako eto an-tany eto Itapiranga, saingy ho tara loatra ho an'ireo izay manana tsy niova fo. Tsy maintsy ho eo ny fiovam-po! Amin'ny toerana rehetra izay efa nisehoako sy nanohizako, dia manamafy hatrany ny fisehoko aho ka tsy hisy fisalasalana, ary eto Itapiranga, dia ho voamarina ny fisehoako any an-danitra. Hitranga izany rehefa tapitra ny fisasako eto eto Itapiranga. Samy hahita ny famantarana nomena eto amin’ity Hazo ity ity rehetra; hibebaka izy ireo satria tsy nihaino ahy, satria nihomehy ny hafatro sy ny irakako, fa tara loatra izany satria hamitaka ny hatsarako izy ireo. Ho hadinin'izy ireo ny fotoana ho voavonjy. Mivavaha, mivavaka, mivavaha! ”
Dom Carillo Gritti, evekan'ny diosezin'i Itacoatiara, dia nankatoavin'ny fizarana 1994-1998 ny fisehoana ho "goavam-be" izay niainga tamin'ny 31 Mey 2009 ary nametraka ny vato fehizoron'ny Sanctuary vaovao any Itapiranga tamin'ny 2 May 2010. ho an'i Edson Glauber, izay mihoatra ny 2000 pejy, dia mifanaraka tsara amin'ny loharanom-paminaniana maro azo itokisana, ary manana fatra eschatolojika mafy, no tanjon'ny fandalinana maro. Nanam-pahaizana momba ny mari-pahaizana, Dr. Mark Miravalle, ao amin'ny Oniversite Steubenville, dia nanokana boky ho azy ireo Ny Fo Telo: Fisehoan'i Jesosy, Marka ary Josefa avy any amin'ny Amazon.
Hatramin'ny nahafatesan'i Dom Gritti tamin'ny taona 2016, dia mbola nisy ny fifanolanana mbola tsy voavaha teo amin'ny diosezin'i Itacoatiara sy ny fikambanana naorin'i Edson Glauber sy ny fianakaviany hanohanana ny fananganana ny Sanctuary. Ny mpandrindra Diocesan dia nifandray tamin'ny fiangonana ho an'ny Fotopampianaran'ny Finoana ary nahazo fanambarana tamin'ny taona 2017 amin'ny fiantraikany fa ny CDF dia tsy nandinika ireo fisehoan'olombelona mahery vaika niaviany, toerana iray izay nitazona ny Archdiocese of Manaus ihany koa. Ny CDF, teo ambany kardinaly Gerhard Ludwig Müller tamin'izany fotoana izany dia tsy nanonona mpahita faharoa, renin'i Glauber, Maria do Carmo, izay nihaona tamin'ny fankatoavan'ny Eveka Gritti ankehitriny.
Raha toa ka tsy ekena amin'ny fomba ofisialy intsony ny fisehoana (fa tsy ekena amin'ny fomba ofisialy), dia azo apetraka amin'ny fomba ara-dalàna ny antony nahatonga antsika nisafidy haneho ireo fitaovana noraisin'i Edson Glauber amin'ity tranonkala ity. Eto dia tokony hambara fa, raha toa ny fankatoavan'ny eveka taloha dia tokony hoheverina ho voavonjy ihany, ny fanambarana CDF dia tsy ara-teknika no fanamelohana "Fampandrenesana" ofisialy, ary nisy mpaneho hevitra maro no nametraka fanontaniana momba ny fanavaozana ny fomba fanaon'ny mpitantana Diocesan. . Ankoatr'izay, ny hetsika sahanin'ny CDF dia mametra ihany ny 1) fampiroboroboana ofisialy Liturgical ny hafatr'i Edson, 2) "fanaparitahana bebe kokoa" ny hafatr'i Edson tenany na ny 'Association' ao Itapiranga, ary 3) fampiroboroboana ireo hafatra ao anaty Prelature ao Itacoatiara. Mitoetra hatrany amin'ny fankatoavana tanteraka ireo toromarika rehetra ireo isika; ary, raha voaheloka amin'ny fomba ofisialy ny hafany, dia esorinay avy amin'ity tranokala ity izany.
Na dia marina aza fa ny Dr Miravalle dia nanala ny bokiny taorian'ny fianarany ny antontan-taratasin'ny CDF, tsara ihany ny manamarika fa tranonkala marobe manerantany izay ahitana fitaovana ara-paminaniana fantatra fa noho ny fahatokiana ny fampianaran'ny Fiangonana dia nanapa-kevitra hanohy ny famoahana ny dikanteny ny hafatra Itapiranga. Ity angamba no tsara hazavaina amin'ny zava-misy fa, nandritra ny androm-piainan'i Dom Carillo Gritti, dia nahazo fankatoavana tsy fahita firy ilay fisehoana Itapiranga. Ankoatr'izay, ny maha maika ny votoatin'ny hafatra dia ny fanemorana ny fampielezana ity fitaovana ity mandra-pahatongan'ny famahana ny raharahan'i Edson Glauber (izay mety haharitra taona maro) mety hampidi-doza ny fampanginana ny feon'ny lanitra amin'ny fotoana tena ilantsika mihaino izany.
Mompera Stefano Gobbi
Italia (1930-2011) Pretra, Mystika, ary mpanorina ny Marian Movement of Priest
Ity manaraka ity dia zatra, amin'ny ampahany, avy amin'ny boky, NY FAHAGAGANA: Ny fijoroana ho vavolombelona sy faminaniana momba ny fanoratana ny fahazotoana, p. 252-253:
Dadabe Stefano Gobbi dia teraka tany Dongo, Italia, avaratr'i Milan tamin'ny 1930 ary maty ny taona 2011. Amin'ny maha-lay azy, dia nitantana masoivoho fiantohana izy, ary taorian'ny antso tamin'ny fisoronana, dia nahazo dokotera amin'ny teolojia masina avy ny Oniversite Pontifical Lateran any Roma. Tamin'ny 1964, dia natokana tamin'ny faha-34 taonany.
Tamin'ny 1972, valo taona no naha-pretra azy, Fr. Nandeha nitety ny dia tany Fatima, Portugal i Gobbi. Rehefa nivavaka teo amin'ny tokotanin'ny Tomponay izahay dia nisy pretra sasany nandà ny fiantsoana azy ary nanandrana nanangana ny tenany ho fikambanana hikomy tamin'ny Eglizy katolika, dia naheno ny feon'ny Our Lady miangavy azy ny hanangona ireo pretra hafa izay vonona hanolo-tena. ny tenany aminny Fo tsy milaminny Maria ary hiray mafy aminny Papa sy ny Fiangonana. Io no voalohany tamin'ny valizy anatiny an-jatony izay nataon'i Fr. Gobbi dia nahazo nandritra ny androm-piainany.
Tarihin'ireo hafatra ireo avy any an-danitra, Fr. Gobbi dia nanangana ny Marian Movement of Prints (MMP). Ny hafatry ny Lady-ntsika nanomboka tamin'ny Jolay 1973 ka hatramin'ny Desambra 1997, tamin'ny alàlan'ny valiny mankany Fr. Stefano Gobbi, dia nivoaka tao anaty boky, Ho an'ireo pretra, Zanakalahin'ny malalantsika, izay nahazo ny Imprimatur an'ny kardinaly telo sy ny arseveka ary ny Eveka manerantany. Azo jerena eto ny atiny: http://www.heartofmaryarabic.com/wp-content/uploads/2015/04/The-Blue-Book.pdf
Ao amin'ny fampidirana ny boky de facto ny MMP: Ho an'ireo pretra, Zanakalahin'ny malalantsika, hoy ny filazan'ny hetsika:
Vahavelom-pitiavana izay manaitra ny Fitiavan'i Maria izay mazoto ao amin'ny Fiangonana ankehitriny hanampiana ny zanany hiaina, miaraka amin'ny fanantenana sy filam-boto, fotoana fangirifiriana amin'ny fanadiovana. Amin'izao vanim-potoan'ny loza lehibe izao dia manao ny asa tsy misy fisalasalana na tsy fahatokisana ny Renin'Andriamanitra sy ny Eglizy hanampiana ny pretra, izay zanaky ny filoham-piterahana azy. Raha ny tokony ho izy, ity asa ity dia mampiasa fampitaovana sasany; ary tamin'ny fomba manokana, dia i John Stefano Gobbi no voafidy. Nahoana? Ao amin'ny andalan-dahatsoratra iray iray, omena izao fanazavana manaraka izao: "Nifidy anao aho satria ianao no fitaovana tsara indrindra; koa tsy hisy hiteny hoe asanao io. Ny Fihetsika Irak'i Marian dia tsy maintsy ho asako irery. Amin'ny fahalemenao no hampisehoako ny heriko; amin'ny tsy fahaizanao no hanehoako ny heriko ” (hafatra ny 16 Jolay 1973). . . Amin'ny alàlan'ity hetsika ity, miantso ny zanako rehetra aho hanokan-tena ao am-po, ary haparitaka hatraiza hatraiza ny fahitana vavaka.
Fr. Niasa tamim-pahavitrihana i Gobbi mba hanatanterahana ny iraka napetrak'i Our Lady azy. Tamin'ny Martsa 1973, dia pretra efa-polo teo ho eo no nanatevin-daharana ny Tafiky ny Mpaminany Maria, ary tamin'ny faran'ny taona 1985, Fr. Nandeha sidina fiaramanidina 350 mahery i Gobbi ary nanao dia maro an-tsambo sy fiaran-dalamby, nitsidika kontinanta dimy imbetsaka. Ankehitriny dia mitanisa ny maha-kardinaly sy eveka maherin'ny 400, ny pretra katolika maherin'ny 100,000, ary ny katolika mitentina an-tapitrisany eran-tany.
Tamin'ny Novambra 1993, ny MMP tany Etazonia, miorina ao St. Francis, Maine, dia nahazo tsodrano papaly ofisialy avy amin'i Papa John Paul II, izay mitazona fifandraisana akaiky amin'i Fr. Gobbi ary nankalaza ny Mass niaraka taminy tao amin'ny trano fiangonana Vatican azy manokana isan-taona nandritra ny taona maro.
Ireo hafatra nomen'ny Tompontsika an'i Fr. Gobbi amin'ny alàlan'ny valandresaka anatiny dia ny sasany amin'ny ankamaroany sy ny antsipirihany momba ny fitiavany ny fireneny, ny fanohanan'ny pretra azy, ny fanenjehana ny Fiangonana, ary ny antsoiny hoe "Pentekosta Faharoa," fehezanteny iray hafa ho an'ny Fampitandremana, na ny Fahazavan-tsaina ny fanahy rehetra. Amin'ity Pentekosta Faharoa ity, ny Fanahin'i Kristy dia hiditra ao anatin'ny fanahy mahery tokoa sy amin-kery ka amin'ny fotoana dimy ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo minitra dia samy hahita ny fiainany manota ny olona tsirairay. Ireo fampitana hafatra an'i Marian ho an'i Gobbi dia toa mampitandrina fa ity fisehoan-javatra ity (ary aorian'ny fampanantenany fampanantenaana sy fampidiran-drazana koa dia hitranga amin'ny faran'ny taonjato faha-389. [Hafatra # XNUMX] Ny hafatry ny Our Lady of Good Success koa dia milaza fa ny sasany amin'ireo hetsika ireo dia hitranga amin'ny "taonjato faha-XNUMX." Ka inona no manazava io tsy fitovian-kevitra io eo amin’ny fandaharam-potoan’izao tontolo izao?
“Manako ny fotoana famindram-po aho noho ny mpanota. Saingy lozan'izy ireo raha tsy fantatr'izy ireo io fotoana fitsidihako io. ” (Diary nosoratan'i St. Faustina, # 1160)
Ao amin'ny hafatry ny Reny Sambatra ho an'i Fr. Gobbi, hoy izy,
"Matetika aho no niditra an-tsehatra mba hamerenana amin'ny laoniny ny fotoana fanombohana ny fitsarana lehibe, ho fanadiovana izao maha-mahantra izao, izay efa nofehezin'ny fanahy ratsy." (#553)
Ary miverina indray amin'i Fr. Gobbi dia nambarany:
"... noho izany dia nahomby indray aho ny nanemotra ny fotoana nanasaziana ny didim-pitsaran'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona iray izay niharatsy noho ny tamin'ny fotoana tondradrano." (# 576).
Fa ankehitriny, toa tsy misy hatak'andro intsony Andriamanitra. Ny fisehoan-javatra izay nambaran'ny Reny Misaotra an'i Fr. Nanomboka i Stefano Gobbi.
Fanamarihana: Tokony ho 23 taona lasa izay, ny lehilahy sy vehivavy iray tany Kalifornia, izay niara-niaina tamin'ny fotoan'ny ota, nanomboka fiovam-po lalina tamin'ny alàlan'ny Famindrampon'Andriamanitra. Nampandrenesina tany anaty vady ny vadiny hanomboka vondrona rosary rehefa avy nandinika ny novena Divine Mercure voalohany. Fito volana taty aoriana, ny sarivongan'ny Our Lady of the Immaculate Heart ao an-tranon'izy ireo dia nanomboka nitomany menaka be loatra (taty aoriana, sarivongana masina sy sary hafa dia nanomboka nanosotra menaka manitra raha mbola nisy ny hazo fijaliana sy sarivongan'i St. Pio blun. mihantona ao amin'ny Centre Marian izay misy ao amin'ny Divine Mercy Shrine any Massachusetts). Izany dia nahatonga azy ireo hibebaka amin'ny toe-piainan'izy ireo ary hiditra amin'ny fanambadiana sakramenta. Nanomboka ny enin-taona taorian'izay, nanomboka ilay rangahy -tiany maheno ny feon'i Jesosy (izay antsoina hoe "valala"). Tsy nanana katesezy na fahatakarana ny finoana katolika izy, ka ny feon'i Jesosy dia samy nanaitra ary nampiditra azy. Na dia fampitandremana aza ny sasany amin'ireo tenin'ny Tompo dia nofaritany kosa ny feon'i Jesosy ho tsara tarehy sy malefaka foana. Nahazo fitsidihana avy tany Saint Pio sy ny valiny avy any Saint Thérèse de Lisieux, Masindahy Catherine avy any Siena, Md Michael Arkanghelina ary am-polony avy ao amin'ny Our Lady, eo alohan'ny Sakramenta. Taorian'ny nandefasana hafatra sy tsiambaratelo roa taona (izay tsy fantatra afa-tsy amin'ity lehilahy ity ary hampandrenesina amin'ny fotoana ho fantatry ny Tompo ihany) dia nijanona ny valala. Dia hoy i Jesoa tamin-dralehilahy "Hijanona tsy hiresaka aminao intsony aho izao, fa i Neny kosa hanohy hitarika anao."Nahatsiaro ny fiantsoana hanomboka hanantona ny" The Movement of Président "ny mpivady izay hieritreretan'izy ireo ny hafatry ny Our Lady to Fr. Stefano Gobbi. Roa taona lasa izay dia nahatanteraka ny tenin'i Jesosy: nanomboka ny Tariho izy, fa amin'ny fomba tena mahavariana. Nandritra ny fahitana ny andro, ary tamin'ny fotoana hafa, ity lehilahy ity dia hahita "eny amin'ny rivotra" eo alohany. ny isan'ny hafatra avy amin'ilay antsoina hoe "Blue Book, " ny fanangonana ireo fanambarana nomen'ny Lady-ntsika an'i Fr. Stefano Gobbi, "Ho an'ny pretra malalantsika ny zanakavavinay." Tsara homarihina fa nataon'ity lehilahy ity tsy vakio ny Boky manga mandraka androany (satria voafetra ny fianarany ary manana kilema famakiana izy). Nandritra ny taona maro izay, ireo isa niasa ireo dia hanamafy amin'ny resaka tsy tapaka an-tsoratra amin'ny resaka fitenenana, ary ankehitriny dia ireo hetsika mitranga manerana an'izao tontolo izao. Fr. Tsy nahomby ny hafatr'i Gobbi fa efa hita ny fahatanterahany amin'ny fotoana tena izy.
Isaky ny isa azo ao amin'ny Countdown to the Kingdom, dia hataonay eto izany.
Ho an'ny fanokanana tena mahomby an'i Marian, baiko ny boky, Fanamasinana nataon'i Maria: Famerenana ara-panahy ho an'ny fanampian'ny lanitra, notohanan'ny arsevekaire Salvatore Cordileone sy Eveka Myron J. Cotta, sy ilay miaraka aminy Mary's Mantle fanokanana Gazety Vavaka. jereo www.MarysMantleConsecration.com.
Colin B. Donovan, STL, "Fikambanan'i Pretra Marian," valiny ho an'ny EWTN, niditra tamin'ny 4 Jolay 2019, https://www.ewtn.com/expert/answers/MMP.htm
Jereo etsy ambony sy www.MarysMantleConsecration.com.
Foibem-pirenen'ny Fikambanan'ireo Mpikambana Marika any Etazonia, Niresaka tamin'ireo pretra malalany i Our Lady, 10th Edition (Maine; 1988) p. XIV.
Fa maninona ny fanahy any Kalifornia?
Tokony ho tamin'ny taona 1997, dia nisy lehilahy sy vehivavy iray tany Kalifornia, izay niara-niaina tamin'ny fotoan'ny ota, nanana fiovam-po lalina tamin'ny alàlan'ny Famindrampon'Andriamanitra. Nampandrenesina tany anaty vady ny vadiny hanomboka vondrona rosary rehefa avy nandinika ny novena Divine Mercure voalohany. Fito volana taty aoriana, ny sarivongan'ny Our Lady of the Immaculate Heart ao an-tranon'izy ireo dia nanomboka nitomany menaka be loatra (taty aoriana, sarivongana masina sy sary hafa dia nanomboka nanosotra menaka manitra raha nisy hazo fanomboana sy sarivongan'i St. Pio bled. mihantona ankehitriny ao amin'ny Centre Marian izay misy ao amin'ny Divine Mercy Shrine any Massachusetts. Satria ireo sary ireo dia nanomboka nahasarika olona maro ho any an-tranony tany am-boalohany, nanaiky ny tale jeneraliny ara-panahy fa mijanona tsy fantatra anarana izy ireo). Io fahagagana io no nahatonga azy ireo hibebaka amin'ny toe-piainan'izy ireo ary hiditra amin'ny fanambadiana ara-sakramenta.
Nanomboka ny enin-taona taorian'izay, nanomboka ilay rangahy -tiany maheno ny feon'i Jesosy (izay antsoina hoe "valala"). Tsy nanana katesezy na fahatakarana ny finoana katolika izy, ka ny feon'i Jesosy dia samy nanaitra ary nampiditra azy. Na dia fampitandremana aza ny sasany amin'ny tenin'ny Tompo dia nofaritany kosa ny feon'i Jesosy ho tsara tarehy sy malefaka foana. Nahazo fitsidihana avy tany Saint Pio sy ny valiny avy any Saint Thérèse de Lisieux, Masindahy Catherine avy any Siena, Md Michael Arkanghelina ary am-polony ny valiny avy any amin'ny Our Lady, eo alohan'ny fankalazana. Taorian'ny nandefasana hafatra sy tsiambaratelo roa taona (izay tsy fantatra afa-tsy amin'ity lehilahy ity ary hampandrenesina amin'ny fotoana ho fantatry ny Tompo ihany) dia nijanona ny valala. Dia hoy i Jesoa tamin-dralehilahy "Hijanona tsy hiresaka aminao intsony aho izao, fa i Neny kosa hanohy hitarika anao."
Nahatsiaro ny fiantsoana azy ireo hanomboka hanantona ny "The Movement of Président" any mpivady izay hisaintsainany ny hafatry ny Our Lady ny	Fr. Stefano Gobbi	. Roa taona lasa izay no nanatanterahan'ireo tenin'i Jesosy ity: Nanomboka nitarika azy ny Our Lady, fa tamin'ny fomba tena faran'izay tsara indrindra. Nandritra ny cenacles, ary tamin'ny fotoana hafa, ity lehilahy ity dia hahita "eny amin'ny rivotra" eo alohany. Ny isan'ny hafatra avy amin'ilay antsoina hoe "Boky manga,"ny fanangonana ireo fanambarana nomen'ny Our Lady	Fr. Stefano Gobbi	, "Ho an'ny pretra malalantsika ny zanakavavinay."
Na ny mpivady dia mijaly mafy noho ny ministerany, fa atolotry ny Tompo hatrany izany ho famonjena ny fanahy. Tsara homarihina fa nataon'ity lehilahy ity tsy vakio ny Boky manga mandraka androany (satria voafetra ny fianarany ary manana kilema famakiana izy). Nandritra ny taona maro izay, ireo isa niasa ireo dia hanamafy amin'ny resaka tsy tapaka an-tsoratra amin'ny resaka fitenenana, ary ankehitriny dia ireo hetsika mitranga manerana an'izao tontolo izao. Fr. Tsy nahomby ny hafatr'i Gobbi fa efa hita ny fahatanterahany amin'ny fotoana tena izy.
Isaky ny misy tonga any amin'ny Countdown to the Kingdom ireo hafatra ireo dia hataonay eto izany.
Ny mystika poloney, Alicja Lenczewska, dia teraka tany Warsaw tamin'ny 1934 ary maty ny taona 2012, ny fiainany matihanina no nolanina voalohany indrindra ho mpampianatra sy talen'ny mpiara-miasa amin'ny sekoly iray any avaratrandrefan'i Szczecin. Niaraka tamin'ny rahalahiny, izy dia nanomboka nandray anjara tamin'ny fivorian'ny Renisialy Charismatic Katolika tamin'ny 1984 taorian'ny nahafatesan'ny reniny. Tamin'ny 8 martsa 1985, niova tampoka ny fiainan'i Alicja rehefa nihaona tamin'i Jesosy nijoro teo alohany izy taorian'ny nahazoany ny Komuni Masina. Tamin'io daty io no nanombohany nanoratany ny fifampiresahana mistery azy. Misotro ronono tamin'ny 1987, izy dia lasa mpikambana ao amin'ny Family of the Heart of Love of the Crucified, nanao ny voadiny voalohany tamin'ny taona 1988 ary nivoady foana tamin'ny 2005. Izy koa dia navitrika tamin'ny fitoriana ny filazantsara sy nandrafitra fivahiniana masina tany Italia, ny Tany Masina, ary Medjugorje . Tamin'ny taona 2010, nifarana ny fifandraisan'izy ireo mystical, roa taona talohan'ny nahafatesany tamin'ny homamiadana tao amin'ny St. John's Hospice, Szczecin, tamin'ny 5 Janoary 2012.
Ny hazakazaka mihoatra ny 1000 no vita pirinty, ny gazety an-tsoratra ara-panahy roa lehibe indrindra nataon'i Alicja (Fijoroana vavolombelona (1985-1989) sy Exhortations (1989-2010)) dia navoaka tamim-pahatokiana, noho ny ezaka nataon'ny Arsobisialy avy ao Szczecin, Andrzej Dzięga, izay nametraka vaomiera teolojia. ho an'ny fanombanana ny asa sorany, izay nomena ny Imprimatur nataon'ny Eveka Henryk Wejman.Hatramin'ny nisehoany tamin'ny taona 2015 dia nanjary mpivarotra be indrindra teo amin'ny Katolika poloney izy ireo ary matetika dia notononinny mpitondra fivavahana roa, noho ny fahatsapan'izy ireo ny fiainana ara-panahy sy ny fanambarana nataon'izy ireo momba ny tontolo ankehitriny.
Lehilahy amerikana avaratra, izay maniry ny tsy hitonona anarana intsony, ary hataontsika hoe Walter, dia tamim-peo mafy, nirehareha, ary naneso ny finoana katolika, na dia hatramin'ny nandroahana ny vakana rosario avy amin'ny tànany nivavaka sy nanaparitahana azy ireo aza. namaky ny gorodona, nandalo fiovam-po lalina.
Indray andro, ny sakaizany sy ny mpiara-miasa aminy, Aaron, izay vao avy niova fo tao Medjugorje, dia nanolotra an'i Walter boky misy hafatra Mary's Medjugorje. Nentiny niaraka taminy tany amin'ny Katedraly Sakramenta Masina izy nandritra ny fiatoana nisakafoanana tamin'ny asany amin'ny maha-brokerage trano, dia nandany azy ireo ary lasa lehilahy hafa haingana.
Fotoana fohy taorian'izay dia nanambara tamin'i Aaron izy hoe: “Misy fanapahan-kevitra horaisiko amin'ny fiainako. Mila manapa-kevitra aho raha tokony hanokana ny fiainako ho an'ny Renin'Andriamanitra. ”
"Tsara izany, Walter," hoy ny navalin'i Aaron, "fa amin'ny 9 maraina izao, ary mbola misy asa tokony hataontsika. Afaka miresaka momba izany isika any aoriana."
"Tsia, mila manapa-kevitra aho izao," ary niainga i Walter.
Ora iray taty aoriana dia niverina nankao amin'ny biraon'i Aaron izy ary nitsiky ny tarehiny ary nilaza hoe: “Vitako io!”
"Inona no nataonao?"
"Natokako ho an'ny vadintsika."
Nanomboka ny dia niaraka tamin'Andriamanitra sy ny vadintsika izay tsy nantenain'i Walter velively. Raha mbola nandeha nody avy niasa i Walter indray andro, dia nisy fahatsapana mafy tao an-tratrany, toy ny aretin-tratra izay tsy naratra, nanenika azy tampoka. Fahatsapana fahafinaretana mahery vaika izany ka nanontany tena izy raha toa ka voan'ny aretim-po izy, ka dia niala teo amin'ny arabe izy. Avy eo dia nahare feo izay inoany fa Andriamanitra Ray izy: “Ny Reny Sambatra dia nifidy anao hampiasaina ho fitaovana avy amin'Andriamanitra. Hitondra anao fitsapana lehibe sy fijaliana lehibe izany. Vonona hanaiky izany ve ianao? ” Tsy fantatr'i Walter ny dikan'izany - ny nangatahana azy hampiasaina ho toy ny fitaovan'Andriamanitra ihany. Nanaiky i Walter.
Fotoana fohy taorian'izay dia nanomboka niresaka taminy ny vadintsika, indrindra taorian'ny nahazoany kômonio masina. Handre ny feony amin'ny alàlan'ny toerana anatiny i Walter — amin'ny teny mazava aminy toa ny azy — ary nanomboka nitari-dalana, namolavola ary nampianatra azy izy. Vetivety dia nanomboka niresaka tamin'ny alalàn'ny Ramatoa Masina taminà vondrona fivavahana isan-kerinandro izay nitombo sy nitombo.
Ankehitriny ireo hafatra ireo, izay mamporisika, mamolavola, manome fanamby ary manatanjaka ireo sisa mahatoky amin'izao fotoana izao, ny fotoana farany, dia azon'izao tontolo izao. Miaraka, hita ao amin'ny boky izy ireo: Izy izay mampiseho ny làlana: ny hafatry ny lanitra ho an'ny fotoanantsika misavorovoro ary efa nodinihin'ireo pretra maromaro ary hita fa tsy misy lesoka fotopampianarana rehetra ary notohanan'ny Arsevekan'i Emeritus Ramón C. Argüelles avy any Lipa izy.
(1913-1985) Vady, Reny, Mystika, ary mpanorina ny Flame of Love Movement
Elizabeth Szántò dia Hongroianina iray mystic teraka tao Budapest tamin'ny 1913, izay niaina fiainana mahantra sy sarotra. Zanany lahimatoa izy ary hany tokana teo akaikin'ny zandriny mirahalahy enina mirahalahy izay ho velona amin'ny maha-olon-dehibe azy. Maty ny rainy, tamin'izy dimy taona, ary folo taona i Elizabeth dia nalefa tany Willisau, Soisa mba hipetraka miaraka amin'ny fianakaviana mahay. Niverina tany Budapest vonjimaika izy tamin'ny faha-10 ambinadiny mba hiaraka sy hikarakara ny reniny izay narary mafy ary efa natory. Iray volana taty aoriana, dia nasaina nandeha lamasinina iray avy tany Aotrisy i Elizabeth tamin'ny 00:10 maraina, mba hiverina any amin'ny fianakaviana soisa izay nanapa-kevitra ny hanangana azy. Irery izy ary diso ny nahatongavan'izy ireo tao amin'ny gara tamin'ny 1985 ora. Nisy mpivady kely niverina tany Budapest izay nandany ny androm-piainany mandra-pahafatiny tamin'ny XNUMX.
Miaina amin'ny maha-zaza kamboty eo am-pitandremana mosary, i Elizabeth dia niasa mafy mba ho velona. Indroa izy, nanandrana niditra fiangonana ara-pivavahana nefa nolavina. Nisy fiovana lehibe tamin'ny volana Aogositra 1929, rehefa nekena tao amin'ny amboarampeo parisy izy ary nihaona tamin'i Karoly Kindlemann, mpampianatra mpampianatra tsimoka. Nivady ry zareo ny 25 Mey 1930, tamin'izy enina ambin'ny folo ary lasa telopolo izy. Niaraka fa nanan-janaka enina izy ireo ary maty taorian'ny enina ambin'ny folo taona nanambadiana.
Nandritra ny taona maro taorian'izay dia niady i Elizabeth mba hikarakara ny tenany sy ny fianakaviany. Tamin'ny 1948, ny Nationalisation nordista an'ny Hongria dia tompony mahery setra, ary voaroaka tamin'ny asany voalohany izy noho ny tsangambato an'ny reny malalany tao an-tranony. Mpiasa be zotom-po foana i Elizabeth, tsy mbola nahazo vola tsara tamin'ny asa lava nataony nandritra ny fotoana fohy, nandritra ny niezahany hamahana ny ankohonany. Nanambady ny zanany rehetra taty aoriana, ary niara-nody taminy niaraka tamin'ny zanany.
Ny fiainam-bavaka lalina nataon'i Elizabeth dia nahatonga azy ho lasa Karmelita laika, ary tamin'ny 1958 tamin'ny dimy amby efapolo taona izy dia niditra tao anatin'ny haizina ara-panahy nandritra ny telo taona. Nanomboka tamin'io fotoana io dia nanomboka nifampiresaka tsara tamin'ny Tompo tamin'ny alàlan'ny valim-pifandraisana anatiny izy, narahin'ny resaka nifanaovana tamin'i Virjiny Maria sy ilay anjely mpiambina azy. Tamin'ny 13 Jolay 1960 dia nanomboka diary i Elizabeth tamin'ny fangatahan'ny Tompo. Roa taona nanatanteraka an'io dingana io dia nanoratra izy hoe:
Talohan'ny nahazoako hafatra avy amin'i Jesosy sy i Maria Virjiny, dia nahazo fitaomam-panahy toy izao aho: 'Tsy tokony ho tia tena ianao, satria hanolotra anao asa fitoriana lehibe, ary ianao dia hiatrika ilay asa. Na izany aza, ity dia azo atao fotsiny raha mijanona ho tsy tia tena tanteraka ianao, mandao ny tenanao. Io iraka io dia tsy azo omena anao raha maniry anao ihany amin'ny safidy malalaka.
Ny valiny nomen'i Elizabeth dia "Eny," ary tamin'ny alalany dia nanomboka fihetsiketsehana tao am-piangonana i Jesosy sy i Maria teo ambanin'ny anarana vaovao nomena an'io fitiavana lehibe sy mandrakizay nataon'i Maria ho an'ny zanany rehetra io: "Ny afon'ny fitiavana."
Tamin'ny izay lasa Ny Diary ara-panahy, Jesosy sy Maria dia nampianatra an'i Elizabeta, ary manohy mampianatra ireo mahatoky amin'ny kanto masina amin'ny fijaliana hahazoana famonjena fanahy izy ireo. Ny asa dia napetraka isaky ny andro amin'ny herinandro, izay misy ny vavaka, ny fifadian-kanina ary ny vango amin'ny alina, miaraka amin'ny fampanantenana mahafinaritra ao amin'izy ireo, natokana tamim-pahasoavana manokana ho an'ny pretra sy ny fanahy ao anaty fandiovana. Ao amin'ny hafatr'izy ireo, i Jesosy sy i Maria dia nilaza fa ny afon'ny fitiavan-draha tsy mahafaty an'i Maria no fahasoavana lehibe indrindra omen'ny olombelona hatramin'ny Fahatongavana ho nofo. Ary amin'ny hoavy tsy ho ela, ny lelany dia handrehitra izao tontolo izao.
Kardinaly Péter Erdő ao amin'ny Esztergom-Budapest, Primate of Hongria, dia nametraka vaomiera hianarana Ny Diary ara-panahy ary ny fanekena isan-karazany nomen'ny eveka eran'izao tontolo izao amin'ny hetsika The Flame of Love, ho fikambanan'ny olona tsy mivadika. Tamin'ny 2009, ny kardinaly dia tsy nanome ny Imprimatur fotsiny Ny Diary ara-panahy, saingy nekena ireo valiny sy asa soratra miavaka an'i Elizabeth ho tena izy, "fanomezana ho an'ny Fiangonana." Ho fanampin'izany, nomeny ny fankatoavany ny fihetsiketsehana ny hetsika Flame of Love, izay efa niasa tamin'ny fomba ofisialy tao anatin'ny Fiangonana nandritra ny roapolo taona mahery. Amin'izao fotoana izao, mikatsaka ny fankatoavana fanampiny ny hetsika ho toy ny Fikambanan'olona mpino. Tamin'ny 19 jona 2013, Papa Francis dia nanome azy ilay tso-dranon'ny Apostolika.
Nalaina tamin'ny boky lafo indrindra, Fampitandremana: Fijoroana vavolombelona sy faminaniana mikasika ny fanoratana aretin-tsaina.
Pretra, mystika, mpanala devoly, mpanorina ary jeneraly ambony ao amin'ny firahalahiana apôstôlikan'i Saint Benedict Joseph Labre
(Order naorina tamin'ny 2012)
Mampalahelo fa ny pretra momba ilay novakianao dia indrisy, izay lasibatry ny fiampangana diso maro. Izy ireo dia refy amin'ny antsipiriany kokoa Eto. Tokony ho fantatry ny rehetra fa Fr. Manao izany i Michel tsy ankatoavina ny hafatr'ireo mpitazana voalaza (ohatra. John Leary, na hafatra tsy voaheloka "Maria Divine Mercy" na "Army of Mary"). Fr. Michel koa dia tsy misolo vava ny fahavelom-pivelomana (izy irery ihany no nanentana azy hanana vitsivitsy) sakafo an-tokantrano an-tanana noho ny tsy fahatokisana izay, angamba, tsy misy afaka hiady hevitra aorian'ny COVID-19), ary tsy manome toromarika ny mpihaino azy handeha izy ary hanorina "mpitsoa-ponenana" ara-batana. Farany, ny tsaho milaza fa "melohin'ny" Diso sandoka tanteraka ny diosezy; izy sy ny Fraternity naoriny dia miara-miasa tsara amin'ny Fiangonana ary mankatò tanteraka amin'ny fahefana Mpitondra Mpanampy, izay nahazoan'i Fr. Michel fahazoana fankatoavana marobe.
Betsaka ny tsaho diso mivezivezy amin'ny Internet milaza fa Fr. Nilaza zavatra i Michel, ary raha ny marina, dia tsy nambarany mihitsy izy. Mba hahazoana toromarika azo itokisana momba ny tena fampianarany, dia mba jereo azafady ireo teny notononina azy, izay azonao henoina ao anatin'ireo pejin'ity tranokala ity, ary i Fr. Ny fahazoan-dàlana mazava nataon'i Michel handefa eto.
Ity manaraka ity dia nalaina tamin'ny boky lafo indrindra, Fampitandremana: Fijoroana vavolombelona sy faminaniana mikasika ny fanoratana aretin-tsaina:
Fr. Michel Rodrigue no nanorina sy Abbott ny baiko ara-pinoana vaovao neken'ny Eglizy Katolika: The Apostolic Fraternity of St. Benedict Joseph Labre ao amin'ny diosezin'i Amos any Quebec, Canada. Teraka tao amin'ny fianakaviana katolika mahatoky izay nahalasa telo amby roapolo, i Michel dia nihalehibe. Ny fianakaviany dia nipetraka tamina tanimboly kely iray, izay ny asa mafy sy ny fitsangantsanganana mavesatra mankany amin'ny Lamesa Mass dia misy ankizy maro mitaingin-tsoavaly, mitazona ny fianakaviany ho vatana sy fanahy.
Toa an'i St. Padre Pio sy fanahy voafidy hafa, Andriamanitra Ray dia nanomboka niresaka tamin'i Michel tamin'ny vanim-potoana fohy. “Rehefa telo taona aho,” hoy i Fr. Michel, "nanomboka niresaka tamiko Andriamanitra, ary hanana resaka mahazatra izahay. Tsaroako ny nipetraka teo ambanin'ny hazo lehibe tao ambadiky ny tranonay teo amin'ny toeram-piompianinay ary nanontany an'Andriamanitra aho, 'Iza no nanao io hazo io?'
Dia nanao izany, hoy Andriamanitra. Ary rehefa nanonona ny teny izy hoe: 'Izaho', dia nijery tampoka be dia be momba ny tany sy izao rehetra izao ary ny tenako ary azoko fa ny zava-drehetra dia noforoniny sy noforoniny. Nihevitra aho fa niresaka tamin'Andriamanitra Ray ny rehetra. Nanomboka tamiko hatramin'ny telo taona ka hatramin'ny enina taona ny Tompo dia nanome toromarika ahy tao amin'ny finoana ary nanome ahy ny fampianarana teôlôjia feno. Nolazainy tamiko koa fa rehefa telo taona aho dia ho pretra. ” Andriamanitra Ray nanome an'i Michel fianarana tanteraka amin'ny teolojia ka rehefa nanatrika ny seminera ambaratonga voalohany tao Quebec izy taorian'ny lisea, dia nisedra ny sekoly iray tao amin'ny kilasiny izy. Avy eo i Michel dia nandalina ny psikolojia sy ny faritra teolojika, toy ny mariology, pneumatology, ny asa soratry ny Mompera ao amin'ny Fiangonana, izay nahazo diplaoma amin'ny teolojia amin'ny dokotera.
Rehefa avy nanorina sy nitantana trano fialofana ho an'ireo tanora tsy manan-kialofana izy ireo, izay nanolotra fikarakarana ara-tsaina sy ara-panahy azy, dia i Alex Rodrigue dia notendrena ho pretra dioseziana tamin'izy telopolo taona. Mpisorona parisy nandritra ny dimy taona tany avaratr'i Ontario izy mandra-pahafantaran'ny evekany fa ny talenta dia tsara indrindra amin'ny fampiasana mpitondra fivavahana ho avy. Fr. Lasa pretra Sulpician nampianatra teolojia i Grand Seminary any Montréal avy eo.
Tamin'ny krismasy 2009, Fr. Nifandimby niavaka ny fisoronan'i Michel. Nifoha tamin'ny alina izy tamin'ny alàlan'i St. Benedict Joseph Labre, izay nijanona teo anilan'ny fandrianany, namihina ny sorony mba hisarika ny sainy. Fr. Nifoha i Michel ary nandre ny feon Andriamanitra Ray nilaza hoe: "Mitsangàna." Koa ny Fr. Nitsangana i Michel. “Mandehana ao amin'ny solosaina.” Ka dia nankatò izy. "Mihaino sy manoratra." Izany dia rehefa nanomboka namoaka ny lalàm-panorenana manontolo ny lalàm-panorenana ho an'ny fivavahana vaovao, haingana kokoa noho i Fr. Afaka nanoratra i Michel. Tsy maintsy milaza amin'Andriamanitra izy mba hiadana!
Avy eo Andriamanitra dia nikapoka tampoka an'i Fr. Michel nandeha tamin'ny sidina an-tany mankany amin'ny tany Diocese of Amos, Quebec, tany amin'izay toerana nanorenany ny monasitera ary nasehony azy tamin'ny an-tsipiriany ny famolavolana monasitera. Andriamanitra Ray dia nilaza tamin'i Fr. Michel fa izy no hanangana io monasitera io. Hanomboka baiko ara-pinoana vaovao antsoina hoe Fraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre (The Apostolic Fraternity of Joseph Joseph Benedict Labre) mba hanomanana pretra ho amin'ny ho avin'ny Eglizy Katolika. Fr. Tamin'ny voalohany dia natahotra i Michel tamin'ny voalohany, satria efa be loatra ny andraikiny, saingy vetivety dia nahatsapa fa tsy safidy ny tsy hiteny amin'ny Ray. Ankehitriny dia ny voalohany amin'ireo tranoben'ny monasitera naorina izao no ananganana ankehitriny, arak'izay notahin'Andriamanitra.
Nomen'Andriamanitra fanomezana i Fr. Michel Rodrigue miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavana ara-tsaina sy ara-panahy miavaka, toy ny fanasitranana, famakiana fanahy, fahatsiarovana sary (izay nihena taorian'ny aretina mafy sy aretim-po valo!), Faminaniana, toerana ary fahitana. Manana toetra falifaly voajanahary sy fihomehezana vonona izy, ary miaraka amin'izay koa, fahamatorana lehibe momba ny zavatr'Andriamanitra. Nanao exorcism izy, ankoatry ny asany amin'ny maha mpampianatra seminera azy, minisitry ny hopitaly, pretra ao amin'ny paroasy ary farany teo, amin'ny maha mpanorina sy Superior General ny fianakavian'ny mpivavaka vaovao ao Quebec miteny frantsay. Fr. I Michel Rodrigue dia mahazo ny fanohanan'ny evekany feno, ary ny toerana rehetra misy azy sy ny fahitany dia natolotra ny olom-panjakana eo an-toerana mba hahazo fankatoavana.
Nantsoinay ny vadinay Fr. Michel Rodrigue izay "Apostolin'ny vanim-potoana farany." Nomena fahalalana feno sy mahasoa momba ny ho avy eo amin'ny tontolontsika izao. Fr. Ny elanelan'i Michel koa dia manoratra eo amin'ny latabatra lehibe kokoa, izay manambara ny fifandraisan'ny fifandraisana sy ny maha-zava-dehibe ny faminaniana ho an'ny fotoantsika, anisan'izany ireo ao amin'ny Soratra Masina. “Fantatro izao! Hitako izao! ” Lazao ny olona efa naheno ny Fr. I Michel sy ilay efa nivahiny taloha tao amin'ny lahatsoratra ara-paminaniana dia nipoitra ny masony.
Ny tenin'i Fr. I Michel ao amin'ity tranokala ity dia nalaina tamin'ny firaketana an-tsehatra ny fanolorany. Ny sasany amin'ireo lahateniny momba io lohahevitra iray io dia natambatra ho iray, ary indraindray, any amin'ny toerana sasany, ny fandikana dia tsy am-bava mba hampiasa ny fitsipi-pitenenana anglisy.
Fr. Zanaka mpankatò ao amin'ny Eglizy Katolika i Michel. Tranonkala vitsivitsy no namoaka, tsy nahazoana alalana avy aminy, teny momba azy sy avy aminy, izay tsy mitombina. Fr. Tsy manohana na mahafantatra ny hafatr'i Maria Divine Mercy, ohatra, i Michel, ary manohana ny famotorana nataon'ny Eveka Matthew H. Clark momba an'i John Leary, izay nanambara ny hafatr'Andriamatoa Leary ho avy amin'ny olombelona. Jereo eto ny fanambarana nosoniavina nataony.
Manasa anao izahay hamaky momba ny Fr. Rodrigue, manomboka amin'ny tantarany sy hanaraka ireo lahatsoratra sy horonan-tsary amin'ny filaharana izay atolotra azy ireo. Ny fandehanana azy ireo amin'ny fomba hafa dia mety hitondra anao tsy ho tratry ny fahaizanao, satria ny fifampiresahana sy hafatra tsirairay avy any an-danitra dia miorina amin'ny farany. Amin'ny maha mpanome tranonkala an'io tranonkala io, tsapanay fa i Fr. Tsy maintsy sedraina ny fanambarana nataon'i Michel ho toy ny fanambarana tsy miankina ary mandrisika ny mpamaky hanao izany araka ny Catechism of the Catholic Church:
Notarihin'ny Magisterium an'ny Fiangonana, the sensus fidelium hainy ny mamantatra sy mandray an-tsaina ao anatin'ireto fanambarana ireto na inona na inona antso antson'i Kristy na ny olomasiny ho an'ny Fiangonana. -Katesizan'ny Fiangonana Katolika, n. 67
Amin'ny anaran'ny Fr. Michel:
Fr. Didy vaovao nataon'i Michel, The Apostolic Fraternity of St Benedict Joseph Labre any Quebec dia fanomezana tsy takatry ny saina amin'ny hoavin'ny Fiangonana. Tahin'Andriamanitra, ny monasitera faharoa ho an'ny baiko dia mbola eo an-dalam-pametrahana. Raha misy horonantsary manome aingam-panahy anao hividy ilay boky, NY FAHAGAGANA: Ny fijoroana ho vavolombelona sy faminaniana momba ny fanoratana ny fahazotoana, amin'ny QueenofPeaceMedia.com, ampidiro fotsiny ny code coupon, FRATERNITY, eo amin'ny cartes na carte de Checkout, ary ny vola dia halefa hanohana an'i Fr. Ny monasitera vaovao an'ny Michel eo am-panamboarana. Manolotra anao izahay mba hanomezana fanampiana ara-bola mivantana an'i Fr. Michel noho io ezaka lehibe indrindra io. Raha tsapanao hoe niantso ianao, dia andefaso fanomezana eo amin'ny adiresy etsy ambany. (Fr. Michel dia tsy nangataka anay hanao izany! Ary koa, tsy misy fomba an-tserasera ahafahana mandray anjara).
Alefaso azafady ny fisavana natao:
Ny firaharahian'ny apôstôly an'i St. Benedict Joseph Labre
Fa maninona no Gisella Cardia?
Fipoahana any Trevignano Romano, Italia
Ny vaovao hita maso an'i Marian tany Trevignano Romano any Italia ka Gisella Cardia dia vaovao. Nanomboka tamin'ny taona 2016 izy taorian'ny fitsidihana azy tany Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, ary nividy sarivongana an'ny Our Lady, izay nanomboka nitomany ra. Ireo fisehoana ireo dia efa lohahevitry ny fahitalavitra nasionaly fahitalavitra italiana iray izay nanehoan'ny mpahita ny tony na dia teo aza ny fanakianana nataon'ireo panelista tao amin'ny studio ho azy sy ny boky roa. A Nihil vato natolotry ny arseveka iray vao haingana nataon'ny fandikana poloney tamin'io faharoa io, Ao amin'ny Cammino con Maria ("Amin'ny lalana miaraka amin'i Maria") navoakan'i Edizioni Segno, mirakitra ny tantaran'ny fisehoana sy ireo hafatra mifandraika hatramin'ny hatramin'ny taona vahiny toa azy Nihil vato tsy ny tenany ihany no mahaforona in situ fankatoavana diocesan ny fisehoana, azo antoka fa tsy manjary. Ary ny eveka eo an-toerana ao Civita Castellana dia toa nanohana an'i Gisella Cardia tamim-pahatoniana, rehefa nanome fidirana aloha tany am-piangonana ho an'ireo mpitsidika be dia be izay nanomboka nivory tao an-tranon'i Cardia hivavaka, raha vao nanomboka niparitaka ny vaovao.
Misy antony lehibe maro hifantohana amin'i Trevignano Romano ho loharano ara-paminaniana lehibe sy matanjaka. Voalohany, ny votoatin'ny hafatr'i Gisella dia miombona tanteraka amin'ny "marimaritra iraisana" izay nasehon'ireo loharanom-baovao ankehitriny, tsy misy fampahafantarana ny fahatsiarovany ny fisiany (Luz de Maria de Bonilla, Pedro Regis, Fr. Michel Rodrigue, Fr. Adam Skwarczynski , ny diarin'i Bruno Cornacchiola.).).
Faharoa, maro amin'ireo hafatra faminaniana be dia be no ho tanteraka: indrindra isika dia mahita fangatahana amin'ny volana septambra 2019 hivavaka ho an'i Shina ho loharanon'ny aretina an'habakabaka vaovao. . .
Fahatelo, ny hafatra matetika dia niaraka tamin'ny tranga hita maso, porofo sary hita tao Ao amin'ny Cammino con Maria, izay tsy mety ho vokatry ny fakana sary an-tsaina, indrindra ny fisian'ny stigmata amin'ny vatan'i Giselle sy ny fisehoana lakroa na soratra ara-pivavahana ao ra eo amin'ny sandrin'i Gisella. Jereo ireo sary nalaina tamin'ny tranokalan'ny fisehony https://www.lareginadelrosario.com/, izay milaza hoe Siate testimoni ("ho vavolombelony"), Abbiate fede ("manana finoana"), Maria santissima ("Maria masina indrindra"), Popolo mio ("Ry oloko), ary Amore (" Love ").
Mazava ho azy fa mety ho fitaka na fandrebirebena mihitsy aza ireo, toy ny fitomaniana ny sarivongan'i Virjiny sy sarin'i Jesosy ao an-tranon'i Gisella sy ny vadiny, Gianni's. Ny hevitra hoe anjely lavo dia mety ho niandohan'ireo hafatra, na dia toa tsy dia mahomby loatra aza, noho ny votoatin'ny teolojia sy ny fananarana ho amin'ny fahamasinana. Noho ny fahalalantsika amin'ny alàlan'ny fijoroana ho vavolombelona momba ny exorcista mikasika ny fomba halan'ny anjely lavo sy natahotra an'i Maria mandra-pahatongan'ny fandavany ny anarany, dia mety hisy ny famporisihan'ny olona an-tsakany sy an-davany ny famokarana ny teny hoe "Maria masina indrindra" ("Maria santissima") ao anaty rà eo amin'ny vatan'ny mpahita dia toa mifanakaiky eo amin'ny nil.
Na izany aza, ny stigmata Gisella, ny sarin'ny ra "hemografika", na ny sarivongana mpandatsa-dra dia tokony tsy ho azy irery no raisina ho toy ny maneho ny fahamasinan'ny fahitana toy ny hanome azy carte blanche momba ny hetsika rehetra ho avy.
Na izany aza dia misy porofo hafa momba ny zava-mitranga amin'ny masoandro any amin'ny fisian'ireo vavolombelona marobe mandritra ny vavaka any amin'ny toerana fisehoana, mitovitovy amin'ny zava-misy amin'ny "dihy manitra" tao Fatima tamin'ny 1917 na nanaporofo ny Papa Pius XII tao amin'ny Vatican Vatican talohan'ny fitoriana. amin'ny Dogma of the Assumption tamin'ny taona 1950. Ireo trangan-javatra ireo, rehefa hita ny fihodinan'ny masoandro, ny tselatra na ovaina ho Host Eucharistic, mazava ho azy dia tsy azo ampiharina amin'ny fomba maha-olombelona, ​​ary ny firaketana (na dia tsy lavorary aza) amin'ny fakantsary, dia miharihary koa fa tsy fotsiny ny vokatry ny fanamasinana iraisana. kitiho eto raha te hahita horonan-tsary momba ny fahagagana ny masoandro (Trevignano Romano - 17 Settembre 2019 - Miracolo del sole / "Trevignano Romano - 17 Septambra 2019 - Fahagagana ny masoandro.") kitiho eto mahita an'i Gisella, Gianni vadiny, ary pretra manambara ny fahagagana ny masoandro ao anaty vondron'olona iray amin'ny fisehon'ireo Gisella Virjiny. (Trevignano Romano mahagaga miloka 3 gennaio 2020 / "Ny fahagagana tamin'ny tanànan'ny Trevignano Romano, 3 Janoary 2020")
Ny fahalalanao ny tantaran'ny fisehoan'i Marian dia milaza fa ireo fahagagana ireo dia tokony hoheverina ho fanamafisana ny maha-azo itondrana ny serasera any an-danitra.
I Jennifer dia renim-pianakaviana amerikana tanora ary vehivavy mpikarakara tokantrano (voatana ao amin'ny fangatahan'ny talen'ny ara-panahy ny anarany farany mba hanaja ny tsiambaratelon'ny vady aman-janany.) Izy angamba, ilay mety ho nantsoin'ny olona hoe Katolika "mahazatra" mandeha alahady izay tsy nahalala firy momba ny finoany ary na dia kely aza ny momba ny Baiboly. Noheveriny taloha fa "Sodoma sy Gomora" dia olona roa ary ny "Fahasambarana" no anaran'ny tarika rock. Avy eo, nandritra ny fiombonam-bavaka tao amin'ny lamesa iray andro, dia nanomboka nandre izany i Jesosy tamin'ny fanomezana hafatra fitiavana ary fampitandremana nilaza taminy hoe:Anaka, ianao no manitatra ny hafatra momba ny famindram-pon'Andriamanitra. ” Koa satria mifantoka amin'ny fahamarinana ny hafatra ampitainy dia tsy maintsy tonga amin'ny tontolo tsy mibebaka, tena mameno ny hafatry ny St Faustina izy ireo:
… Alohan'ny hahatongavako ho mpitsara marina, manokatra malalaka ny varavaran'ny famindram-poko aho. Izay mandà tsy handalo amin'ny varavaran'ny famindram-poko dia tsy maintsy mamaky ny varavaran'ny fitsarako…-Famindrampon'Andriamanitra ao amin'ny fanahiko, Diary of St. Faustina, n 1146
Indray andro, ny Tompo dia nandidy azy hanolotra ny hafany amin'ny Ray Masina, Papa John Paul II. Fr. Seraphim Michalenko, filoha lefitry ny fampandihizana an'i St. Faustina, nandika ny hafatr'i Jennifer tamin'ny teny poloney. Namaky tapakila ho any Roma izy, ary nanohitra ny zava-dratsy rehetra, dia nahita ny tenany sy ny namany tao amin'ny lalantsara anatiny tao Vatican. Nihaona tamin'i Monsignor Pawel Ptasznik, namana akaiky sy mpiara-miasa amin'ny Papa sy Sekreteram-panjakana poloney ho an'ny Vatican izy. Ireo hafatra dia natolotra an'i Cardinal Stanislaw Dziwisz, sekretera manokan'i John Paul II. Tamin'ny fihaonana manaraka. Pawel hoy, "Atsipohy amin'izao tontolo izao araka izay azonao atao ny hafatra."
Fa maninona i Luz de Maria de Bonilla?
Ity manaraka ity dia namboarina avy amin'ny boky lafo indrindra, NY FAHAGAGANA: Ny fijoroana ho vavolombelona sy faminaniana momba ny fanoratana ny fahazotoana.
Luz de María de Bonilla dia Katolika mystic, stigmatist, vady, reny, Order Order Augustinian ary mpaminany avy any Costa Rica, mipetraka ao Arzantina amin'izao fotoana izao. Nihalehibe tao amin'ny tranom-pinoana iray izy, izay be fandavan-tena lehibe ho an'ny Eokaristia, ary tamin'ny mbola kely, dia nahita fitsidihana any an-danitra avy amin'ny anjelin'ny mpiambina azy sy ny reny Fisaorana, izay noheveriny ho namany sy mpiray finoana aminy. Tamin'ny taona 1990, nahazo fanasitranana mahagaga tamin'ny aretina iray izy, nifanandrinan'ny fitsidihan'ny Reny Fisaorana sy fiantsoana vaovao sy maro kokoa ho an'ny daholobe mba hizara ny zava-miafina mahaliana azy. Tsy ho ela izy dia ho latsaka an-tsehatra lalina tsy eo anatrehan'ny fianakaviany — ny vadiny sy ny zanany valo, fa koa ny olona akaiky azy izay nanomboka nivory mba hivavaka; ary izy ireo dia niforona ho fanamasinana vavaka, izay niaraka taminy mandraka androany.
Taorian'ny taona nandaozany ny sitrapon'Andrimanitra dia nanomboka niharan'ny fanaintainana teo amin'ny hazo fijaliana i Luz de María, izay entiny ao amin'ny vatany sy ny fanahiny. Nitranga izany voalohany, nizara izy, tamin'ny Zoma Taona: “Nanontany ahy ny Tompontsika raha te handray anjara amin'ny fijaliany aho. Namaly tamim-pahatokiana aho, ary taorian'izay ny vavaka mitohy mitohy, tamin'io alina io, dia niseho tamiko teo amin'ny hazo fijaliana i Kristy ary nizara ny feriny. Ny fanaintainana tsy hay lazaina, na dia fantatro aza fa na dia mampahory ihany izany, tsy ny fitombon'ny fanaintainana izay itohizan'i Kristy mijaly amin'ny maha-olombelona. ” (("Revelamos Quen Es la Vidente Luz de María," Foros de la Virgen María, niditra tamin'ny 13 Jolay 2019, https://forosdelavirgen.org/118869/luz-de-maria-reportaje))
Tamin'ny 19 martsa 1992 no nanomboka niresaka matetika tamin'i Luz de María i Reny Fisaorana. Hatramin'ny teo dia nahazo hafatra roa isan-kerinandro izy matetika, ary iray ihany. Ny hafatra tany am-boalohany dia tonga toy ny valala anatiny, narahin'ny fahitana an'i Maria, izay tonga manazava ny iraka nataon'i Luz de María. "Mbola tsy nahita hatsarana firy aho," Nilaza i Luz momba ny fisehon'i Maria. “Zavatra tsy ho zatra ananao intsony ianao. Ny fotoana tsirairay dia toy ny voalohany. ”
Volana maro taty aoriana, dia nampiditra azy tamin'ny Tompontsika tamin'ny fahitana i Maria sy Saint Michael Arkanjely, ary tamin'ny fotoana, dia hiresaka aminy i Jesosy sy i Maria amin'ny fotoana ho avy, toy ny Fampitandremana. Ny hafatra dia avy amin'ny tsy miankina ho an'ny besinimaro, ary amin'ny alàlan'ny baikon'Andriamanitra, dia tsy maintsy ampitaina azy amin'izao tontolo izao izy ireo.
Betsaka ny faminaniana voarain'i Luz de María no efa tanteraka, ao anatin'izany ny fanafihana ny Twin Towers any New York, izay nambara tamin'ny valo andro mialoha. Ao amin'ireo hafatra ireo, Jesosy sy Maria dia naneho ny alahelony lalina noho ny tsy fankatoavan'ny olona ny lalàna masina, izay nahatonga azy hifanaraka amin'ny faharatsiana ary hanao zavatra hanohitra an'Andriamanitra. Mampitandrina ny tontolon'ny fahoriana lehibe ho avy izy ireo: ny kômonisma sy ny fahatongavany ho avy; ady sy fampiasana ny fitaovam-piadiana niokleary; fahalotoana, mosary ary areti-mandringana; revolisiona, korontana sosialy ary faharatsiana ara-pitondran-tena; a schism ao am-piangonana; ny fahalavoana eo amin'ny toekarena izao tontolo izao; ny endrika ivelany sy ny fanapahana an'izao tontolo izao ny antikristy; ny fanatanterahana ny Fampitandremana, ny Fahagagana, ary ny famaizana; ny fianjeran'ny asterôida, ary ny fiovan'ny jeografika terestrialy, amin'ireo hafatra hafa. Izany rehetra izany dia tsy mba hampitahorana, fa hanentana ny olona hibanjina an'Andriamanitra. Tsy ny hafatra rehetra avy amin'Andriamanitra no zava-doza. Misy ihany koa ny fananganana ny fitsanganan'ny finoana marina, ny firaisan'ny vahoakan'Andriamanitra, ny fandresena ny fon'ny tsy manam-petra an'i Maria, ary ny fandresena farany an'i Kristy, Mpanjakan'izao rehetra izao, rehefa tsy hisy fisarahana intsony, ary ho iray ihany isika eo ambanin'ny Andriamanitra tokana.
Dada José María Fernandez Rojas dia nijanona teo anilan'ny Luz de María ho mpitan-tsoratra azy hatrany am-piandohana ny fahitana azy sy fahitana, ary mpisorona roa no miasa miaraka aminy. Ny hafatra voarainy dia horonantsary noraisin'ny olona roa ary avy eo natory avy amin'ny masera iray. Ny pretra iray dia manitsy fanitsiana tsipelina, avy eo ny iray hafa manome fisafoana farany amin'ireo hafatra alohan'ny nampidirany azy ireo tao amin'ilay tranokala www.revelacionesmarianas.com, hozaraina amin'izao tontolo izao. Nangonina tao anaty boky mitondra ny lohateny ny hafatra, Ho tonga anie ny fanjakanao, ary ny 19 martsa 2017 dia nomen'i Juan Abelardo Mata Guevara, SDB, Titular Evekan'i Estelí, Nicaragua, ho Imprimatur an'ny Fiangonana izy ireo. Nanomboka ny taratasiny:
Estelí, Nikaragoà, Taonan'ny Tompontsika, ny 19 martsa 2017
Famotsoran 'ny Patriarka Saint Joseph
Ireo boky izay mirakitra ny "PRIVATE REVATIONATION" avy any an-danitra, nomena an'i Luz de María nanomboka tamin'ny taona 2009 ka hatramin'izao, dia nomena ahy ho fankatoavana ara-pinoana. Nodinihiko tamim-pinoana sy nahaliana an'ireto boky ireto mitondra ny lohateny hoe, THY KINGDOM COME, ary tsoakevitra fa antso ho an'ny zanak'olombelona hiverina izy amin'ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay, ary ireo hafatra ireo dia famporisihana avy any an-danitra amin'izao fotoana izao. izay ao no tokony hitandrina ny olona tsy hiala amin'ny Tenin'Andriamanitra.
Ao amin'ny fanambarana tsirairay nomena an'i Luz de María, Jesosy Kristy Tompontsika sy Maria Virjiny Masina dia mitari-dàlana ireo dingana sy asa ary zavatra ataon'ny vahoakan'Andriananahary amin'izao fotoana izao izay ilain'ny olombelona hiverina amin'ny fampianarana izay voarakitra ao amin'ny Soratra Masina.
Ny hafatra amin'ireto boky ireto dia enti-miasa amin'ny toe-panahy, fahendrena masina, ary fitondran-tena ho an'ireo izay mandray azy ireo amin'ny finoana sy ny fanetren-tena, noho izany dia manoro hevitra azy ireo hamaky sy hisaintsaina ary hampihatra aho.
AZO AZONAO fa tsy nahita hadisoana fotopampianarana izay manandrana manohitra ny finoana, ny fitondran-tena ary ny fahazarana tsara, izay ametrahako ireo gazety ireo ny IMPRIMATUR. Miaraka amin'ny tsodranoko dia maneho ny faniriako tsara indrindra aho amin'ny "Tenin'ny Lanitra" izay misy eto mba hiorenan'ny zava-tsoa rehetra. Miangavy anao i Maria Virjiny, Renin'Andriamnitra sy Reninay, mba hifona ho antsika mba hahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra
". . . ety an-tany tahaka ny any an-danitra (Mt, 6:10). ”
Lehiben'ny Episkôp'i Estelí, Nikaragoà
Ity ambany ity ny fanolorana nomen'i Luz de María tao amin'ny Katedraly Esteril any Nikaragoà, miaraka amin'ny fampidirana nomen'ny Eveka Juan Abelardo Mata izay nanome azy ny Imprimatur:
Tsindrio eto raha hijery ilay horonan-tsary.
Satria tokoa dia nisy ny marimaritra iraisana iraisam-pirenena nipoitra fa ny hafatra avy ao Luz de Maria de Bonilla dia tokony hoheverina ho mendrika. Betsaka ny antony mahatonga an'io, izay azo fintinina toy izao:
• The Imprimatur an'ny Eglizy Katolika, nomen'ny Bishop Juan Abelardo Mata Guevara an'i Esteril tamin'ny taona 2017 mankany amin'ny asa soratr'i Luz de Maria taorian'ny 2009, miaraka amina fanambarana manokana manamafy ny finoany ny fiaviany goavambe.
• Ny votoatin'ny teolojika sy ny fampianarana momba ireo hafatra sy fanolorana ity.
• Ny fisian'ireo tranga maro nambara tamin'ireto hafatra ireto (fipoahana volkano tany amin'ny toerana manokana, ny fanafihan'ny mpampihorohoro amin'ny toerana manokana, toa an'i Paris) dia efa tanteraka ary marina.
• Ny fiovam-po akaiky sy amin'ny antsipiriany, tsy misy areti-mando, miaraka amin'ny hafatra avy amina loharano lehibe hafa izay toa tsy nahalala i Luz de Maria (toa an'i Fr. Michel Rodrigue sy ireo mpahita tany Heede, Alemaina nandritra ny vanim-potoana fahatelo Reich).
• Ny fisian'ny trangan-javatra tsy fahitana mitohy izay mitohy amin'i Luz de Maria (stigmatization, ny hazo fijaliana amin'ny rà eo alohany, sary masina manala menaka). Indraindray dia eo imason'ny vavolombelona izay ananantsika porofo amin'ny horonantsary (jereo eto).
Raha hamaky bebe kokoa momba an'i Luz de Maria de Bonilla, jereo ilay boky, NY FAHAGAGANA: Ny fijoroana ho vavolombelona sy faminaniana momba ny fanoratana ny fahazotoana.
Fa maninona no Marco Ferrari?
Tamin'ny 1992, nanomboka nihaona tamin'ny namany i Marco Ferrari hivavaka momba ny Rosary ny asabotsy hariva. Tamin'ny 26 martsa 1994 dia naheno feo iray izy nilaza hoe "Anaka, manoratra!" «Ry malala, zanako malala, aza matahotra, Izaho [reninao], manorata ho an'ny rahalahinao sy anabavinao rehetra». Ny fisehoana voalohany ny "Reny Fitiavana" tamin'ny tovovavy 15 taona dia nanomboka tamin'ny Jolay 16; ny taona nanaraka, dia nomena hafatra manokana ho an'ny Papa John Paul II sy ny evekan'i Brescia i Marco, izay nifindrany tamim-pahatsorana. Izy koa dia nahazo tsiambaratelo 1994 momba izao tontolo izao, Italia, fisehoana eto amin'izao tontolo izao, ny fiverenan'i Jesosy, ny Fiangonana ary ny tsiambaratelon'i Fatima fahatelo.
Nanomboka tamin'ny taona 1995 ka hatramin'ny 2005 dia nahita stigmata i Marco nandritra ny Karemy ary namerina ny Fitiavan'ny Tompo tamin'ny Zoma Tsara. Toe-javatra maro hafa tsy voadinika momba ny siantifika koa no voamarina tao Paratico, ao anatin'izany ny fampidirana ny sarin'ny "Reny Fitiavana" misy ny vavolombelona 18 tamin'ny 1999, ary koa ny fahagagana eokaristika roa tamin'ny 2005 sy 2007, ny faharoa no nitranga. ny havoana fisehosehoana misy olona mihoatra ny 100 manatrika. Na dia ny vaomiera mpanao famotorana napetraky ny evekan'i Brescia Bruno Foresti dia nanangana toerana ofisialy momba ny fisehoana aza, dia navela navela hihaona amina fiangonana iray any amin'ny diosezy aza ny Fiangonana.
Marco Ferrari dia nanao fivoriana telo niaraka tamin'i Papa John Paul II, dimy niaraka tamin'i Benedict XVI ary telo niaraka tamin'i Papa Francis; miaraka amin'ny fanohanan'ny Fiangonana ofisialy, ny Association of Paratico dia nanangana tambajotra iraisam-pirenena iray hoe "Oases of the Mother of Love" (hopitaly ho an'ny ankizy, kamboty, sekoly, fanampiana ho an'ny boka, gadra, mpifoka zava-mahadomelina…). Ny fanevan'izy ireo dia notahin'ny Papa Francis tato ho ato.
I Marco dia manohy mandray hafatra amin'ny alahady fahefatra isam-bolana, ny votoatiny izay mifamatotra tanteraka amin'ireo loharanom-paminaniana maro azo itokisana.
Fampahalalana fanampiny: http://mammadellamore.it/inglese.htm
Fa maninona no manana ny fahitana ny Tompon'ny Tompontsika ao Medjugorje?
Medjugorje dia iray amin'ireo tranonkala fisehoana «mavitrika» be mpampiasa eran'izao tontolo izao. Tamin'ny volana Mey 2017 dia nisy komisiona naorin'ny Papa Benedict XVI ary notarihin'i Kardinaly Camillo Ruini namarana ny famotopotorana azy ireo momba ireo fisehoana ireo. nifidy nanohana ny fanekena ny toetra tsy takatry ny saina amin'ny fisehoana fito voalohany. Tamin'ny volana Desambra tamin'io taona io dia nanaisotra ny moratorium ny fivahiniana masina diosezy ny Papa Frances, nanandratra an'i Medjugorje ho toerana masina. Ny arsevekan'i Vatican, Arsevekan'i Henryk Hoser, dia notendren'ny papa koa hanara-maso ny fikarakaran'ireo mpivahiny ao, tamin'ny nanambarany tamin'ny Jolay 2018 fa "loharanom-pahasoavana ho an'izao tontolo izao io tanàna kely io." Tao amin'ny resadresaka nifanaovany tamin'ny Eveka Pavel Hnilica, nanambara ny Papa John Paul II fa, "Medjugorje dia fitohizan'ny, fanitarana an'i Fatima." Hatramin'izao, ny fampirantiana sy ny fahasoavana miaraka aminy dia namokatra fanasitranana efa-jato mahery, antso an-jatony ho an'ny fisoronana, minisitera an'arivony manerantany, ary fiovam-po tsy tambo isaina ary matetika mahatalanjona.
Raha mila topimaso ara-tantara ny fahitan'ny Fiangonana an'i Medjugorje dia vakio Medjugorje… Izay mety tsy ho fantatrao. Mark Mallett koa dia nanome valiny tamin'ny fanoherana 24 ny fisehoana. Read Medjugorje… Ny sigara G.unser.
Raha hamaky aingam-panahy ny fiovam-po mahavariana vokatry ny fisehoana Medjugorje sy ny famakiana ny kaontin'ireo fisehoana voalohany, dia jereo ny mpivarotra, FARANY amin'ny tantaram-panahy: Tantara mahagaga momba ny fanasitranana sy fiovam-po amin'ny alalàn'i Maria ary NY LALANA ARY MARO: Ny fomba enina lahy no nahazo ny ady lehibe indrindra tamin'ny fiainany.
Fa maninona i Pedro Regis?
Fahitana an'ny Vavahady Anguera
Amin'ny hafatra 4921 voalaza fa voarain'i Pedro Regis nanomboka tamin'ny 1987, ny vatan'ny fitaovana mifandraika amin'ny fisehoan'ny Our Lady of Anguera any Brezila dia tena goavana. Nahasarika ny sain'ny mpanoratra manokana toy ny Saverio Gaeta mpanao gazety malaza, ary izy io dia nanjary lohahevitra natao tamin'ny fandinihana boky nahaterahan'i Annarita Magri.
Raha jerena aloha dia mety ho hita miverimberina ny hafatra (fiampangana matetika ao amin'ireo Medjugorje) amin'ny resaka fiantohana hatrany ny lohahevitra afovoany: ny filàna manokan-tena tanteraka amin'Andriamanitra, mahatoky amin'ny tena Magisterium an'ny Fiangonana, ny lanjan'ny vavaka, ny Soratra Masina ary ny Eokaristia. Na izany aza, rehefa dinihina mandritra ny fotoana maharitra kokoa, ny hafatra Anguera dia mikasika ny lohahevitra isan-karazany izay tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'ny Fiangonana na fanambarana ankatoavina manokana.
Ny toeran'ny Fiangonana manoloana ny fisehon'ny Anguera dia mitandrina be; sahala amin'i Zaro di Ischia, dia natsangana ny vaomiera iray ho an'ny tanjona fanombanana. Na izany aza, tokony holazaina fa ny toeran'i Msgr. Zanoni, ny arsevekan'i Feira de Santana ankehitriny, miaraka amin'ny andraikitry ny diosezy ho an'i Anguera, dia manohana be tokoa, araka ny hita amin'ity dinidinika fohy ity (amin'ny teny portogey misy lohateny italiana). kitiho eto
Ary ny Arsobisialy Zanoni dia niseho ampahibemaso tao Anguera anilan'i Pedro Regis, ary mitahy ny mpivahiny.
Mazava ho azy fa ny votoatin'ny hafatra ireo dia tsy mety avy amin'ny demonia satria ny orthodoxy teolojika hentitra. Marina fa ilay Dominikanina amerikanina François-Marie Dermine dia niampanga an'i Pedro Regis tao amin'ny media katolika italianina fa nahazo ny hafatra tamin'ny alàlan'ny "fanoratana mandeha ho azy." Ny mpahita, dia izy irery, nanohitra mivantana an'io hypothesis io sy nandresy lahatra (kitiho eto). Raha hijery an'i Pedro mizara ny hafatra efa azony, kitiho eto.
Mikasika ny fisafoana akaiky ny hevitra nataon'i Fr. Dermine raha ny amin'ny fanontaniana ankapobeny momba ny fanambarana manokana ankehitriny no jerena, vetivety dia hita fa manana teolojia izy a priori manohitra faminaniana rehetra (toa ny nosoratan'i Fr. Stefano Gobbi) ary mihevitra ny fahatongavan'ny Era of Peace izay fomba fijery diso. Raha ny mety ho nahafahan'i Pedro Regis namorona hafatra saika 5000 tao anatin'ny fe-potoana efa ho 33 taona, dia tsy maintsy anontaniana ny antony mety hamporisihany hanao izany izy. Ho an'ny fomba manokana, ahoana no fomba nieritreretan'i Pedro Regis ny hafatra be dia be # 458, izay azony ampahibemaso rehefa nandohalika nandritra ny adiny roa tamin'ny 2 Novambra 1991? Ary ahoana no fomba nanoratany izany amin'ny taratasy mihoatra ny 130, isa mialoha, miaraka amin'ilay hafatra mijanona tsara amin'ny faran'ny pejy 130? Tsy nahalala ny dikan'ny teny teolojika sasany tao amin'ny hafatra i Pedro Regis. Tombanana ho manodidina ny vavolombelona 8000 no nanatrika, anisan'izany ny mpanao gazety amin'ny fahitalavitra, satria ny Our Lady of Anguera dia nampanantena ny andro teo aloha fa hanome "famantarana" amin'ireo fisalasalana.
Fa maninona ny Mpanompon'Andriamanitra Luisa Piccarreta?
Ireo izay mbola tsy nahare fampidirana mety amin'ireo fanambarana momba ny "Fanomezana fiainana amin'ny sitrapon'Andriamanitra," izay natolotr'i Jesosy an'i Luisa indraindray dia diso fanantenana amin'ny zotom-pon'ireo izay nanana an'io fampidirana io: "Nahoana no manamafy be ny hafatr'ity vehivavy lainga ity avy any Italia izay maty 70 taona mahery lasa izay? ”
Na dia afaka mahita fampidirana toy izany aza ao amin'ny boky ianao. Ny Crown of History, Ny satrobonin'ny fahamasinana, Ny herin'ny sitrapoko (navoakan'ny Vatican mihitsy), Torolàlana ho an'ny Bokin'ny Lanitra (izay mitondra tsy takatra), famintinana fohy nataon'i Mark Mallett Momba an'i Luisa sy ireo soratany, ny asan'ny Fr. Joseph Iannuzzi, sy loharanom-baovao hafa, avelao izahay, amina fehezanteny vitsivitsy, mba hiezaka hampitsahatra ny tsy fitovian-kevitra.
Tahaka ny fanambarana mahatalanjona ny Famindrampon'Andriamanitra izay nankinin'i Jesosy tany amin'i St. Faustina Ny famonjena farany ataon'Andriamanitra (talohan'ny Fiavany Fanindroany amin'ny fahasoavana), toy izany koa ny fanambarany momba ny toetran'Andriamanitra dia natolotry ny Mpanompon'Andriamanitra Luisa Piccarreta Ny ezaka farany ataon'Andriamanitra amin'ny fahamasinana. Ny famonjena sy ny fanamasinana: ireo finiavana roa lehibe ananan'Andriamanitra ny zanany malalany. Ny taloha dia ny fototry ny farany; araka izany, mety ny efa niely voalohany ny fanambarana nataon’i Faustina; kanefa, amin'ny farany, Andriamanitra dia tsy te-hanaiky ny famindram-pony fotsiny, fa hanaiky ny fiainany manokana ho toy ny fiainantsika ary noho izany dia lasa mitovy aminy - araka izay azo atao amin'ny zavaboary iray. Raha ny fanambarana nataon’i Faustina, ny tenany, dia mifanitsy tsy tapaka amin’ity fahamasinana vaovao hiaina ao anaty Sitrapon’Andriamanitra ity (toy ny fanambarana nataon’ireo maro momba ny mystika feno fankatoavana feno 20th taonjato), navela ho an'i Luisa ho mpitati-baovao voalohany sy "sekretera" amin'ity "fahamasinana vaovao sy masina" ity (araka ny niantsoan'ny Papa Masindahy Joany Paoly II azy).
Na dia ortodoksa feno aza ny fanambaran'i Luisa (naverin'ny Fiangonana foana izany ary na dia efa nankatoavina aza tamin'ny fomba maro), na izany aza, dia omen'izy ireo ilay hafatra, faran'izay mahavariana indrindra. Ny hafatr'izy ireo dia mampisaintsaina tokoa fa ny fisalasalana amin-dry zareo dia ho feno fanahy tsy misy antony marim-pototra noho ny fisalasalana toy izany. Ary ny hafatra dia izao: aorian'ny fanomanana 4,000 taona ao anatin'ny tantaran'ny famonjena sy ny 2,000 taona amin'ny fanomanana mipoaka kokoa amin'ny tantaran'ny Fiangonana, dia vonona handray ny satroboninahiny ny Fiangonana; vonona handray an'izay nomen'ny Fanahy Masina azy izy amin'ny fotoana rehetra. Tsy misy hafa noho ny fahamasinan'i Edena mihitsy, izany hoe ny fahamasinana ananan'i Maria koa, tamin'ny fomba tonga lafatra kokoa noho i Adama sy i Eva -ary efa azo alaina izany ankehitriny ho an'ny fangatahana. Ity fahamasinana ity dia antsoina hoe "Miaina amin'ny Sitrapon'Andriamanitra." Fa fahasoavan'ny fahasoavana. Ny fanatanterahana ny vavaka "Rainay" ao amin'ny fanahy, ny sitrapon'Andrimanitra hatao ao aminao tahaka ny fanaon'ireo olo-masina any an-danitra. Tsy manolo ny fombafomba sy fomba fanao efa nangatahan'ny Lanitra antsika izany: mampiditra ny Sakramenta, mivavaka amin'ny Rosaly, mifady hanina, mamaky soratra masina, manokan-tena ho an'i Maria, manao asa famindram-po, sns. miantso mavitrika kokoa sy misandratra kokoa aza, satria afaka manao izany rehetra izany amin'ny fomba tena voafaritra tsara isika.
Saingy nilaza tamin'i Luisa koa i Jesosy fa tsy afa-po amin'ny fanahy vitsy fotsiny izy ary misy miaina ny fahamasinana "vaovao". Ho avy izy hanatanteraka ny fanjakany manerana an'izao tontolo izao ao amin'ny vanimpotoana mahafinaritra eo amin'ny fiadanam-pirenena. Izao ihany no ho tanteraka ny vavaka "Rainay"; ary io vavaka io, ilay vavaka lehibe indrindra natao hatrizay dia faminaniana azo antoka avy amin'ny molotry ny Zanak'Andriamanitra. Ho avy ny fanjakany. Tsy misy ary tsy misy afaka manakana an'izany. Saingy, amin'ny alàlan'i Luisa, Jesosy dia miangavy antsika rehetra ho tonga hitory an'io Fanjakana io; hianatra bebe kokoa momba ny Sitrapon'Andriamanitra (satria efa nampahafantarin'i Luisa ny halaliny); hiaina ao amin'ny sitrapony ny tenantsika ary hanomana ny fototry ny fanjakany maneran-tany; ny hanome Azy ny sitrapontsika mba hanomezany antsika ho azy.
“Ry Jesosy, matoky Anao aho. Hatao anie ny sitraponao. Omeko anao ny sitrapoko; azafady mba omeo ahy ny valinao. ”
“Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao et Earth an-tany tahaka ny atao any an-danitra. ”
Ireo no teny nangataka an'i Jesosy mba tsy ho ao an-tsaintsika, sy ny fontsika ary ny vavantsika.
Fa maninona i Simona sy i Angela?
Ireo mpamaky ny Tompontsika an'ny Zaro
Ireo fisehoan-javatra niseho tany Marian tany Zaro di Ischia (nosy iray eo akaikin'i Naples any Italia) dia nitohy hatramin'ny 1994. Ireo mpitazana roa ankehitriny dia i Simona Patalano sy i Angela Fabiani, dia mahazo hafatra amin'ny faha-8 sy 26 isam-bolana, ary Don Ciro Vespoli, izay manome fitarihana ara-panahy ho azy ireo, dia ny tenany amin'ny iray amin'ireo vondrona mpahita mandritra ny dingana voalohan'ny fisehoana, talohan'ny nahatongavany ho pretra. (I Don Ciro izay, fara fahakeliny, vao namaky ireo hafatra nosoratan'i Simona sy i Angela taorian'ny nivoahany avy tao amin'ny toerany na "miala sasatry ny Fanahy"riposo nello Spirito").
Ny hafatra avy amin'ny Our Lady of Zaro dia mety tsy dia fantatra amin'ny tontolo miteny anglisy, fa misy tranga iray azo atao amin'ny fitsaboana azy ireo amin'ny antony maro. Ny voalohany dia ny manam-pahefana diosezy no mianatra am-pahavitrihana azy ireo ary tamin'ny taona 2014 dia nametraka vaomiera ofisialy niandraikitra, ankoatry ny zavatra hafa, miaraka amin'ny fanangonana fijoroana ho vavolombelona momba ny fanasitranana ary voankazo hafa mifandraika amin'ireo fisehoana. Noho izany, ireo mpahita sy ny fitafiany, noho izany dia miziriziry mafy, ary ny fahalalantsika, dia tsy nisy fiampangana ny fanararaotana. Don Ciro, tenany, dia nanondro fa tsy afaka notendren'i Msgr izy. Filippo Strofaldi, izay nanaraka ny fahitana nanomboka tamin'ny 1999, dia namoaka ny tsy fahitana ilay fisehoana na diabolic na vokatry ny aretin-tsaina. Ny zava-dehibe fahatelo amin'ny fahazoana am-bavany ny fisehoana Zaro / hafatra dia ny porofo mazava fa tamin'ny 1995, dia ireo fahitana dia toa fahitana miharihary (navoaka tao amin'ny magazine fepetra lehibe) tamin'ny fanimbana ny Towers Twin * tany New York tamin'ny 2001. (Io no nahasarika ny sain'ny mpanao gazety nasionaly tamin'i Zaro). Raha ny momba ny atiny mavesatra izay matetika mampihetsi-po, ** dia misy ny fitoviana manaitra eo amin'izy ireo sy ireo loharano matotra hafa, tsy misy lesoka teolojika.
Horonantsary fanadihadiana (italiana) ahitana rakitsoratra 1995 an'ny mpahita (anisan'izany i Ciro Vespoli):
Don Ciro Vespoli dia iray amin'ireo vondrona mpahita tany am-boalohany ho tanora, ary lasa pretra izy. Tsy mipetraka any akaikin'i Zaro intsony izy fa mandray sy manakorontana ireo hafatra.
Ny tantaran'i Valeria's Copponi momba ny fandraisana toerana avy any an-danitra dia natomboka fony izy tao Lourdes niaraka tamin'ny vadiny miaramila tamin'ny fivahinianana masina. Teo izy dia nandre feo iray izay nofantariny ho anjeliny mpiambina, nilaza taminy mba hitsangana. Natolony an'i Our Lady avy eo, izay nilaza hoe: "Ianao no ho cenacle" - teny izay vao azony taona maro taty aoriana rehefa nampiasa azy io ny pretra iray tao anatin'ny vondrom-bavaka natombony tany an-tanànan'ny tanànan'i Roma, Italia. Ireo fivoriana ireo, izay nandefasan'i Valeria ny hafany, dia natao indroa isam-bolana ny alarobia, avy eo isan-kerinandro noho ny fangatahan'i Jesosy, izay nolazainy fa tsofa tao amin'ny fiangonana Sant'Ignazio mifandraika amin'ny fihaonana amin'ny Jesuit Amerikanina, Fr. Robert Faricy. Ny fiantsoan'i Valeria dia nohamafisin'ny fanasitranana isan-karazany maro, ao ny iray avy amin'ny sclérose marobe, izay nahitana ny fahagagana tao Collevalenza, ny 'Italiana Lourdes' ary ny tranon'i Espaina Andriamatoa Speranza di Gesù (1893-1983), ankehitriny beatification.
I Fr. Gabriele Amorth izay namporisika an'i Valeria hanaparitaka ny hafany ivelan'ny tranom-bavaka. Mifangaro mialoha ny fihetsiky ny klerjy: ny pretra sasany tsy mino, fa ny hafa kosa mandray anjara feno amin'ny cenacle.
The manaraka dia avy amin'ny tenin'i Valeria Copponi manokana, araka ny ambara ao amin'ny tranonkalany ary nadika avy amin'ny Italiana: http://gesu-maria.net/. Misy dikanteny anglisy hafa azo jerena ao amin'ny tranonkala anglisy eto: http://keepwatchwithme.org/?p=22
“Fitaovana ampiasain'i Jesosy mba hanandramana antsika hanandrana ny Teniny mandritra ny fotoantsika. Na dia tsy mendrika aza aho dia manaiky amin'ny fahatahorana sy andraikitra lehibe ity fanomezana lehibe ity aho, ary manolotra ny tenako tanteraka amin'ny sitrapony masina. Ity charism mahavariana ity dia antsoina hoe "valala." Tafiditra ao am-po io teny io izay tsy avy amin'ny saina, fa avy amin'ny fo, toy ny hoe "niteny" azy avy tao anaty.
Rehefa manomboka manoratra (andao atao hoe ambanin'ny jadona) dia tsy fantatro ny dikany. Amin'ny farany, rehefa mamaky indray aho dia azoko tsara ny dikan'ny teny hoe "nanambara" ho ahy bebe kokoa na haingana kokoa amin'ny fiteny teolojika izay tsy azoko. Tamin'ny voalohany, ny zavatra izay i gaga ny tena lehibe indrindra dia ity asa "madio" ity tsy misy fanala na fanitsiana, tonga lafatra ary marina kokoa noho ny didy jadona tsotra, tsy misy reraka amin'ny ahy; mivoaka milamina avokoa. Saingy fantatsika fa ny Fanahy dia mitsoka aiza sy amin'ny sitrapony, ary miaraka amin'ny fanetren-tena lehibe ary miaiky fa raha tsy misy Izy dia tsy afaka manao na inona na inona, dia manary ny tenantsika hihaino ny Teny, iza no làlana, fahamarinana ary fiainana. ”